Maamulka Koonfur Galbeed oo shir ka yeeshay la dagaalanka Al-Shabaab - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Maamulka Koonfur Galbeed oo shir ka yeeshay la dagaalanka Al-Shabaab
Maamulka Koonfur Galbeed oo shir ka yeeshay la dagaalanka Al-Shabaab
Taliyaha qeybta Booliska Qeybta Gobolka Baay Gaashanle Sare Aamin Maxamed Daruur ayaa Maanta shir gudoomiyey shirka Todobaadlaha gollaha Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Shirka ayaa waxaa looga hadlay u diyaar garoowga Howlgalloada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidii loo xoojin lahaa Amniga guud ee degaannada Koonfur Galbeed.
sidoo kale shirka waxaa sigaar ah diirada loogu saaray sidoo loo sugi lahaa amniga Magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe oo ka dhacayso doorashada Xildhibaanada Aqalka hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Taliyaha qeybta Booliska Qeybta Gobolka Baay Gaashanle Sare Aamin Maxamed Daruur ayaa faray Saraakiisha ka qeyb gashay kulanka inay dardar geliyaan howlaha sugida amniga iyo dagaalada ka dhan ah Al-Shabaab.
Dhawaan Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed laftagareen iyo Taliyaha qeybta 60aad ee Ciidanka xoogga dalka waxaa ay sheegeen in Al-Shabaab laga saari doono degaannada ay kaga sugan yihiin Koonfur Galbeed.
Previous articleXiisad dagaal oo ka taagan degaan ka tirsan Gobolka Galgaduud
Next articleUrrurada Bulshada Rayidka oo Afar qodob kasoo saaray khilaafka Farmaajo & Rooble